बजार सारांश (मङ्सिर ६, २०७५)
गत साता नेप्से परिसूचक २४ दशमलभ १७ अङ्क (२ प्रतिशत) घटेर ११८१ दशमलव ४१ मा बन्द भएको छ । अहिलेको समयमा नेप्से परिसूचक ५० दिनको मुभिङ एभरेज र २०० दिनको मुभिङ एभरेजभन्दा तल चलिरहेको छ । पछिल्लो हप्ता दैनिक औसत कारोबार रकम रू. १६ दशमलव ५१ करोड रहेकोमा गत साता कारोबार रकम बढेर रू. २४ दशमलव ८६ करोड पुगेको छ ।
पछिल्लो हप्ता नेप्सले हेड एण्ड सोल्डर प्रवृत्तिको नेकलाइन क्रश गरेर तल गइसकेपछि नेप्सेको अर्को टार्गेट ११५० तिर पर्न आउँछ । साथै, नेप्से परिसूचक पछिल्लो समयमा डिसेण्डिङ वेजभित्र चलिरहेको छ । नेप्सेले वुधवार डिसेण्डिङ वेजको टेवामा गएर ह्यामर मैनबत्ती प्रवृत्ति बनाएको छ, जसले बजारमा सानो करेक्शन आउन सक्ने सङ्केत गरेको छ ।
2018-11-25 - 129 view(s) - abhiyan